YouTube Go no fampiharana vaovao an'i Google ho an'ny tsena vao misondrotra | Vaovao momba ny gadget
YouTube Go no fampiharana vaovao an'i Google ho an'ny tsena misimisy
Raha tia horonan-tsary isika, dia azo inoana fa tokony hitandrina tsara amin'ny fampiasantsika ny fampiharana YouTube hankafizantsika ireo horonantsary ankafizintsika indrindra. Na afaka miandry hahatratra ny fifandraisana Wi-Fi isika na handalo ny fampidinana ireo horonantsary ao an-trano ary hamindra azy ireo amin'ny fitaovana. Fantatr'i Google izany ary manomana fampiharana vaovao antsoina hoe YouTube Go izy, fa tsy amin'izao fotoana izao dia tsy ho avy hanolo ny rindranasa YouTube amin'ny sehatra misySatria ho any India ihany no misy azy io, farafaharatsiny aloha, izay ny taham-pahalalana sy ny tamba-jotra finday dia tsy novolavola toa an'i Eropa na Amerika.
Saingy hoy ny Google, rehefa mandeha ny fotoana dia hahatratra firenena maro ity fampiharana ity ary avy eo azo inoana fa hosoloin'ilay ampiasaintsika ankehitriny. YouTube Go dia manolotra fomba efatra samihafa hitsimbinana antsika amin'ny taham-bolanay:
Fomba ivelany, izay ahafahantsika misafidy ireo horonantsary mba hahafahantsika mifidy ilay fitaovana alaina amin'ny alàlan'ny fifandraisana Wi-Fi, hahafahantsika mankafy azy ireo nefa tsy mampiasa angona finday.
Preview mode, izay hanoro antsika GIF hamintina ny horonantsary.
Fampahalalana momba ny angon-drakitra izay ho lany arakaraka ny kalitao nofidinay.
Zarao amin'ny olon-kafa ilay horonan-tsary mba tsy hampiasa ny angon-drakitrao hijerena ilay horonan-tsary.
Amin'izao fotoana izao dia efa nampahafantatra ny momba an'ity rindranasa vaovao ity amin'ny alàlan'ny bilaoginy i Google, saingy tsy fantatray hoe rahoviana marina no hisy izany. Ny hany zavatra fantatsika tsara dia ny hahatongavany any India amin'ny voalohany. Azo inoana fa vantany vao misy io, manomboka mivezivezy amin'ny internet ny apk ary afaka misintona azy ny mpampiasa Android rehetra hanomboka hampiasa azy io, raha mbola tsy manana karazana fetra ara-jeografika ny fampiharana.
Mifanohitra amin'izay, rehefa misy amin'ny iOS, somary sarotra kokoa ny raharaha satria ny mpampiasa iPhone dia tsy maintsy manokatra kaonty any amin'ny App Store ao amin'ny firenena mba hampidinana ilay rindranasa, ary raha mbola tsy manana fetra ara-jeografika ny asa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » YouTube Go no fampiharana vaovao an'i Google ho an'ny tsena misimisy
Amin'ny 27 Oktobra dia hanambara ny valim-bola Q4 i Apple
BlackBerry DTEK60 dia zava-misy ary ireo no masontsivana